Khabiirka Sky Sports Ee Charlie Nicholas Oo Muujiyay Laba Sababood Oo Ayna Chelsea Wax Rajo Ah Ugu Lahayn Camp Nou Iyo Sabab Kale Oo Ay Barca Ku Dhibaatayn Karto. – GOOL24.NET
Khabiirka Sky Sports Ee Charlie Nicholas Oo Muujiyay Laba Sababood Oo Ayna Chelsea Wax Rajo Ah Ugu Lahayn Camp Nou Iyo Sabab Kale Oo Ay Barca Ku Dhibaatayn Karto.
Khabiirka Sky Sports ee Charlie Nicholas ayaa ka hadlay laba sababood oo haddii ay Chelsea samayso ayna wax rajo ah ugu yeelan doonin Camp Nou marka ay arbacada booqdaan kooxda Barcelona laakiin Charlie Nicholas ayaa xusay sabab kale oo haddii Antonio Conte uu sameeyo ay ku waxyeelayn karaan Barcelona.
Chelsea ayaa iskeenaysa Camp Nou iyada oo ku qasban in ay ugu yaraan hal gool ku dhaliso isla markaana ay shabaqa kooxdeeda ilaashato si ay ugu soo bixi karto siddeed dhamaadka UEFA Champions League maadaama oo Barcelona haddaba ku soo baxi karto barbarihii 1-1 ka ahaa ee Stamford Bridge.
Khabiirka Sky Sports ee Charlie Nicholas ayaa sheegay in sababta ugu wayn ee ay Chelsea ku rajo beeli kartaa ay tahay in Lionel Messi uu nasho badan qaatay isla markaana aanu ciyarin kulankii Malaga taas oo sabab buuxda u noqon karta in kooxda Antonio Conte ay dhibaato wayn mari doonto.
Sababta labaad ayuu Charlie Nicholas ku sheegay in haddii Antonio Conte uu doorto in uu ku ciyaaro tatikadii kulankii Manchester City oo kale in markaas ay rajada kooxdiisu tahay mid xun oo ayna soo bixi karin halka uu xusay in Alvaro Morata ama Olivier Groud oo shaxda lagu soo bilabaa ay Blues fursad fiican siin karto.
Ugu horayn Charlie Nicholas oo ka hadlaya sababta ugu wayn ee Chelsea ay halis u gali karto oo ah tatikada Antonio Conte ayaa yidhi: “Haddii uu Conte ku ciyaaro si la mid ah qaabkii Manchester City taas oo aan filayo in uu samayn doono, iyagu kuma raaxaysan doonaan, sababtoo ah waxay markale ku fashilmi doonaan in ay qaybta ay garoonka ka joogaan ka soo baxaan”.
Charlie Nicholas oo ka hadlaya in Morata ama Giroud oo safka weerarka lagu soo bilaabaa ay Barcelona wax yeeli karto ayaa yidhi: “Barcelona waxay horumar u samaysay difaac ahaan, laakiin wali waxaad aawoodi kartaa in aad iyaga heli karto sababtoo ah ujeedadooda weerar. Waxaan filayaa in haddii ay helaan Alvaro Morata ama Giroud oo afka hore ah, ugu yaraan waxay awoodi karaan in ay kubbada marar dhar ah haysan karaan oo ay Hazard siin karaan fursado uu goobta ku tago oo uu waxyeelo ku samayn karo”.
Laakiin Charlie Nicholas ayaa ku dooday in uu arkayo Eden Hazard oo galab kale oo niyadjab ah qaadan doona maadaama oo aanu kubbad badan heli doonin wuxuuna yidhi: “Si kastaba ha haaatee, anigu waxaan arki karaa isaga oo galab kale oo niyadjab ah qaadanaya, marka aan ognahay in aanu isagu helayn taageero loo muujiyo awoodiisa, wuxuuna maalinta ka bixi doonaa isaga oo ku riyoonaya in xili ciyaareedka danbe uu Barcelona kaga hor yimaado Real Madrid”.
Ugu danbayn khabiirka Sky Sports ee Charlie Nicholas ayaa ka hadlay nasashadii Lionel Messi iyo sida uu rajada Chelsea u dili karo wuxuuna yidhi: “Lionel waxa uu qaatay nasasho fiican usbuuc dhamaadkii si uu kan diyaar ugu noqdo, sidaa daraadeed anigu haba yaraatee rajo badan uma hayo Chelsea”.